ikhaya » I-Tag Archives: I-World Post Post
Archives Tag: Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba
2018 #NABSikhombisa: I-Series Master Master: uJanusz Kaminski: Iminyaka emithathu yeZithombe zokwenza
Yivayo kwenye yezona ziboniso ezibonakalayo ezibonakalayo kwi-2018 #NABShow! UJanusz Kaminski uye waletha kwi-movie ye-movie Iminyaka eyi-30 yobugcisa obubonakalayo ekuboneleleni ngomsebenzi osisigxina. Ungaphuthelwa kulo mnye udliwano-ndlebe kunye nalo mlando ophilileyo kunye nomphathi wefestile! UJanusz Kaminski: Iintathu ...
2018 #NABShow: I-Series Master Master: "I-Black Panther": Ukuxelela iNdaba ye-Superhero Njengaye
Ungaphuthelwa i-2018 #NABSibonisa i-Master Master Series: "I-Black Panther": Ukuxelela iNdaba ye-Superhero NjengeNye ngoMvulo, ngo-Aprili 9 kwi-10: 30AM- 11: 20AM kwindawo yeS222-S223. Le ngqungquthela efundisayo iza kuhlanganisa zonke iinkqubo zenkqubo yokuhlela equkethe ukuhlela umfanekiso, isandi kunye nemiboniso yembonakalo. I-panelist ekhoyo (kunye ne-bios) iya kubandakanya: iGeffrey Baumann unguMphathiswa we-Visual Effects Supervisor kunye ...
2018 #NABShow: Ukuqwalasela ikusasa leRadio
Le seshoni yamandla ebonakalayo "Ixesha elizayo leRadio Tracking," liza kuba nabaphathi abakhulu beBeasley Media Group, iCox Media Group, i-Entercom kunye neJacs Media ngokuxoxa ngeenzame zamashishini zangoku kunye nokwabelana ngeembono zabo kwixesha elizayo lomsakazo. Iingongoma eziphambili zengxoxo ziza kuba i-radiyo iqhubana njani ne-auto industry, ukudibanisa isakhiwo kunye nabathengisi, kunye namanyathelo amasha. Iseshoni iya kuthatha ...